ခင်ပွန်းကိုယ်တိုင်ဝိတ်ချပေးလို့ ကိုယ်အလေးချိန် (၁၂၃) ပေါင်ကနေ (၁၁၆) ပေါင်အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်ရဲ့ဗီဒီယို – အနုပညာရပ်ဝန်း
ခင်ပွန်းကိုယ်တိုင်ဝိတ်ချပေးလို့ ကိုယ်အလေးချိန် (၁၂၃) ပေါင်ကနေ (၁၁၆) ပေါင်အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်ရဲ့ဗီဒီယို
ကလေးမွေးပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာရော ကလေးမွေးပြီးတဲ့ ကာလတွေမှာပါ ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းနဲ့အများတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပိုးအိအိခန့်ဟာလည်း သားလေးကိုမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်တွေတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အရင်လို သွယ်လျလျခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ ခင်ပွန်းကတာဝန်ယူပြီး ဝိတ်ချပေးခဲ့ပါတယ်။
ဇနီးအတူတူလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးပြီး ချစ်ဇနီးလေးလှပဖို့အတွက် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဝိတ်မချခင်ကတော့ ကိုယ်အလေးချိန် (၁၂၃) ပေါင်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ (၁၁၆) ပေါင်အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် (၁၀) ပေါင်လောက်ထပ်ချမယ့် အကြောင်းကိုလည်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
သူမတို့နှစ်ယောက်လေ့ကျင့်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ” ကျွန်မကို ဝိတ်ချပေးခဲ့သော personal trainer ကြီးကို သတိရသောအားဖြင့် အမှတ်တရတင်လိုက်ပါတယ်ရှင် (၁၂၃) ပေါင်မှ (၁၁၆) ပေါင် စီသို့ Video လေးက (၁၂၃) ပေါင်တုန်းကပါ နောက်မှဆက်လက်၍ (၁၀) ပေါင်လောက် ထပ်ချပါ မည် ခုတော့ trainer မအားသေးတုန်း ထမင်းတွေစားပြီး ဝိတ်ထိန်းထားတယ် (၁၁၆) ပဲ ” ဆိုပြီး တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မကို ဝိတ်ချ ပေးခဲ့သော personal trainer ကြီးကို သတိရသော အားဖြင့် အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်ရှင်၁၂၃ ပေါင်မှာ ၁၁၆ ပေါင်စီသို့ ….Video လေးက ၁၂၃ ပေါင်တုန်းကပါ နောက်မှ ဆက်လက်၍ ၁၀ ပေါင်လောက်ထပ်ချပါမည်ခုတော့ trainer မအားသေးတုန်း ထမင်းတွေ စားပြီး ဝိတ်ထိန်းထားတယ် ၁၁၆ ပဲ ??? ???
Posted by Poe Ei Ei Khant on Tuesday, 15 September 2020
ကလေးမွေးပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလမှာရော ကလေးမွေးပြီးတဲ့ ကာလတွေမှာပါ ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းနဲ့အများတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပိုးအိအိခန့်ဟာလည်း သားလေးကိုမွေးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်အလေးချိန်တွေတက်လာခဲ့ ပါတယ်။ အရင်လို သွယ်လျလျခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ ခင်ပွန်းကတာဝန်ယူပြီး ဝိတ်ချပေးခဲ့ပါ တယ်။
ဇနီးအတူတူလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးပြီး ချစ်ဇနီးလေးလှပဖို့အတွက် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဝိတ်မချခင်ကတော့ ကိုယ်အလေးချိန် (၁၂၃) ပေါင်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ (၁၁၆) ပေါင်အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် (၁၀) ပေါင်လောက် ထပ်ချမယ့် အကြောင်းကိုလည်း ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
သူမတို့နှစ်ယောက်လေ့ကျင့်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ” ကျွန်မကို ဝိတ်ချပေးခဲ့သော personal trainer ကြီးကို သတိရသော အားဖြင့် အမှတ်တရတင်လိုက်ပါတယ်ရှင် (၁၂၃) ပေါင်မှ (၁၁၆) ပေါင် စီသို့ Video လေးက (၁၂၃) ပေါင်တုန်းကပါ နောက်မှဆက်လက်၍ (၁၀) ပေါင်လောက် ထပ်ချပါ မည် ခုတော့ trainer မအားသေးတုန်း ထမင်းတွေစားပြီး ဝိတ်ထိန်းထားတယ် (၁၁၆) ပဲ ” ဆိုပြီး တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။credit
မြင်နေကျပုံစံတွေနဲ့မတူဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖက်ရှင်လေးနဲ့ တစ်မျိုးလေးဆန်းသစ်စွာလှနေပြန်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
သားသမီးလေးလိုချစ်ရတဲ့ ခွေးလေးသုံးကောင်နဲ့ အိမ်မှာဓာတ်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ပုံရိပ်တွေ